Cali Dheere: Waan beegsan doonaa diyaaradaha Amisom – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xarakada Al-shabaab ayaa ku gooddisay in ay beegsan doonto diyaaradaha sahayda u sida ciidamada AMISOM ee ku sugan gobollada Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa sheegay inay dhawaan diyaarad ka mid ah kuwa sahayda u geeya ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Galguduud ay ku guuleysteen inay soo ridaan, ayna qorsheyanayaan inay kuwa kalena sidaas oo kale u soo ridaan.
Cali Dheere wuxuu sheegay inay sidoo kale sii wadi doonaan weerarrada ay Muqdisho ka geysnayaan, isagoo xusay inay xoogaggoodu diyaar u yihiin inay naftooda huraan sidii ay cadowga ula dagaalami lahaayeen.
“Inaan weerarno, madaxtooyada, garoonka diyaaradaha iyo meelaha muhiimka ah sida isgoyska KM-4 ayaa naga go’an” ayuu Cali Dheere shalay u sheegay dadka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Afhayeenka Alshabaab ayaa sidoo kale xusay iney dhawaan banaanka usoo bixi doonaan. “Ma jirto cid naga hor-istaagi karta inaan weerarro ka fulinno goobahaas goobaha kala duwan ee Muqdisho, Innaga waan isku kallsoonnahay 100%, dibadda ayaana soo istaagi doonnaa, waana la arki doonaan keennii dhinta” ayuu Sheekh Cali Dheere hadalkiisa ku daray.
Al-Shabaab ayaa Muqdisho ka fulisay bishii Ramadaanka ee lasoo dhaafay weerarro isugu jiray dilal qorsheysan, dagaallo iyo kuwo toos ah oo xarumo ay ka mid tahay madaxtooyada la beegsadeen.
Ku dhawaad 70 ruux ayaa Alshabaab Muqdisho ku dileen tan iyo markii ay bilaabaatay bisha Ramadaanm waxaana dadkaas ka mid ahaa labo xildhibaan.
Xafiiska IGAD ee Muqdisho oo beeniyey arrin culus oo lagu eedeeyey